မြန်မာ့ တန်ဖိုးကြီး ပတ္တမြားများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြန်မာ့ တန်ဖိုးကြီး ပတ္တမြားများ (၁)
မြန်မာ့ တန်ဖိုးကြီး ပတ္တမြားများ (၁)
Posted by kaungngelay on Oct 5, 2014 in Community & Society, Environment, Sciences & Resources | 8 comments
စာပေတန်ဖိုးအား လွန်စွာကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ ထို့ထက်ပိုမိုတင်စားလိုသော်လည်း စကားလုံးကား ရှာမရပါ။ နည်းပညာရှင်များတွင် အတော်များများသည် တော်ကြ၏။ သို့သော် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တတ်သိနားလည်သဘောပေါက်၏။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်၏။ တွေးခေါ်မှုကောင်း၏။ နာမည်ကြီး၏။ သို့သော် သူတစ်ပါးနားလည်အောင် မရှင်းပြတတ်။ ရှင်းပြရာတွင်လည်း တပည့်များ၊ အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအား ထိရောက်အောင် မရှင်းပြတတ်။
အချို့သောနည်းပညာသမားများမှာ ရှင်းပြနိုင်သည်။ သင်ပြနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ သို့သော် စာရေးရန် အင်မတန်ပြင်းကြ၏။ ရေးဖို့ အချိန်မရကြတာလည်း ပါနိုင်သည်။
အချိုသောနည်းပညာသမားများမှာ အထက်ပါ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးလုံးတွင်လည်း ပါဝင်သည့်အပြင်၊ သူတစ်ပါနားလည်အောင်၊ နားဝင်အောင် ရေးသားမှတ်တမ်း တင်ပြုစုတတ်ကြပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် နည်းပညာကလောင်ရှင်များဟု တင်စား ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ စာရေးချင်သော်လည်း၊ ယခုအခါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်သော Health and Safety အကြောင်းဖတ်မှတ် စုဆောင်းနေရပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ဒါပြီးမှ ပိုက်ပိုက်ပေးမည်ဟု ပြောသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်လေ့လာမိသော ဆရာ၏စာများမှာ အင်မတန်ထိရောက်သော စာအရေးအသားများကို (ကိုယ်ကြိုက်တာကိုး) တွေ့ရပြီး သာမန်အရပ်သားများ၊ ( ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းများကို ဆိုလိုပါသည်။) တစ်ခါတရံလည်း စင်ကာပူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဝင် နည်းပညာရှင်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း လေ့လာခွင့်ရပါသည်။ ကျွန်တော်လေးစားမိသော ဆရာအမည်မှာ ဆရာကြီး ဦးအေးငြိမ်းြဖစ်ပြီး၊ ဆရာနှင့် မရင်းနှီးပါ။ ဆရာစာများအရ စင်ကာပူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် Safety Officer အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုအချိန်အထိ နည်းပညာနှင့်ပက်သက်သော ဘာသာပြန်စာများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အတွေ့အကြုံများ၊ မြန်မာနည်းပညာရှင်တစ်ဦး၏ သင်တန်းအတွေ့အကြုံများ၊ စင်ကာပူနည်းပညာလောကအကြောင်းစသည့်ဖြင့် စုံစုံစိစိ ရေးသားတင်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။
ဆရာစာပေများအား ဖတ်ရှု့ပြီးနောက်၊ ကျွန်တော်လို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ နှင့် နပမ်းသတ်ရတော့မည့် သနားစရာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများအား ယခုပို့စ်ဖြင့် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ကူညီပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော သူဖြစ်ခဲ့လျှင်…. အောက်ပါလင့်ဒ်လေးကို သွားကြည့်ပါခင်ဗျာ…
အထက်ပါစာများဖြင့် ဆရာကြီး၏စာများအား အားမနာတမ်း၊ ခွင့်မတောင်းဘဲ ကူးယူကာ၊ ကိုယ်ရေးသလိုလိုနှင့် သူများအား သင်ပါတော့မည်။ ထိုသို့မသင်လည်း ယခုနိုင်ငံတကာနှင့်လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းခွင်အား ကုမ္ပဏီမှ လက်လွှတ်ရသော် ကျွန်တော်မောင်သူရိန်စနက်မကင်းဖြစ်အံ့၊ ထိုသူများအား ဆရာစာများအား အလုံးလိုက်ကူးယူပြီး၊ သူတကာတို့၏အသက်အိုးအိမ်တို့အား ကာကွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ရသော် ကျွန်တော် မောင်သူရိန် ခိုးကူးခြင်းအတွက် စိတ်သန့်ပါတော့မည်….
ဆရာကြီး ဦးအေးငြိမ်းအား ယခုပို့စ်ဖြင့် ဂါရဝပြုပါသည်…. (မနက်ဖြန်တွင် မောင်မင်းလူကလေးမင်းသိပ်တော်တယ်… ဆိုသော စကားလေးတခွန်းရပါတော့မည်)
Credit to : Sayargyi U Aye Nyein
စိတ်ကောင်းရှိသော သူရိန်အား ကယ်မည့်သူအမြဲရှိသည်။
ဖွေးဖွေးအတွက် ပိုးကြေး ပန်းကြေး ပတ္တမြားလိုချင်လို့လား…
မောင်ရင်… ဒီပတ္တမြားလုပ်ကွက်ကို အရင်းတည်ပြီး ဖွေးဖွေးအတွက် ကိုယ်အလုပ်တွေကြိုးစားနေတာ…
အလကားစတာပါ… တူး..တူး… ဒီစာတွေက ဆရာကြီးမရှိတော့ရင်တောင် ကျန်ခဲ့တော့မယ့် အရာတွေပါဗျာ…
ဒါနဲ့ ဟိုနေ့က Popular စာရင်းထဲမှာ တွေ့လိုက်တယ် Dave ရဲ့ “ဝိုင်းစုရဲ့စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုခဲ့မယ်ဆိုရင်” ထက် ကိုယ့်ပို့စ်က ပိုကောင်းပါတယ်… ဘယ့်နှယ့် အခုတော့ လာဆွေးနွေးတာတောင် အားမရှိလိုက်တာ…
အောက်ပါစာပေပညာရှင်များမှာ ဝိုင်းစုပို့စ်အား အားပေးထားသူများဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုလေးဘဲ ကိုယ့်ပို့စ်လေးကို “ကျေးဇူးပါ” ဆိုတာလေး ရေးသွားခဲ့ရင် အရမ်းကို ကျေနပ်မိမှာပါ…
၂) kaung kg16
၃) မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ
၄) ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း)
၅) minmin king
၆) snow white
၁၀) Thet Aung
၁၁) Khinphone Htet
၁၃) မဟာရာဇာ အံစာတုံး
၁၄) Mr. MarGa
၁၅) lu lu
၁၆) Char Too Lan
တိန် တိန် လေးခါတိန်… နှစ်ခါက ကိုကိုအလင်းဆက်တိန်ထားတယ်…
အန်တီဇီက လှို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားပြီဆိုတော့
မတတ်နဲ့တော့လေ…. မြန်မာလိုလေး ဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိကုန်ပြီ…
ဒီမှာက တချို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေက စာမဖတ်တတ်တဲ့သူတောင်ပါသေး…
ပေးလည်း မဖတ်မှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင် ဝင်စစ်၊ ဓါတ်ပုံရိုက် လုပ်ရတော့မှာဆိုတော့
ထွက်ပေါက်လေး တစ်ခု ရသွားပြီပေါ့….
အန်တီဇီဇီ တက်မယ်ဆို သင်တန်းကြေးက ကြာဇံနဲ့ ပက်သက်တာဘဲ တာဝန်ယူပါ တစ်ဖွဲလုံးစာ
တာဝန်ယူမယ်ဆို ဝဲကမ်း ဇီ၊ ဝဲကမ်း ဘဲရီးဂွတ်… ဘဲမဂွတ်… ဘဲတစ်အုပ်ပါဂွတ်ပြီ…
ဒီလိုတော့လည်း မနောက်ပါနဲ့ သူကြီးရယ်…
ပညာကို ရွှေအိုးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာ နိမ့်တယ်ထင်တယ်လေ…
အခုကတော့ ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံ့မနစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း.. ဆရာကြီးရေးထားတာလေးလည်း…
ခိုးချ.. ဟုတ်ပါဘူး လေ့လာ… လေ့လာရင်း ကိုယ်နဲ့များ တိုက်ဆိုင်လာခဲ့ရင် ကိုယ်လို ဒုက္ခရောက်မဲ့သူ…
မရောက်သေးလည်း စင်ကာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အကြောင်းလေးလဲ တစေ့တစောင့် လေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့လေ… ပထမတော့ တစ်ချို့ကြိုက်တာလေးတွေ ကူးပြီး Credit ပေးထားမလားလို့ပါဘဲ… နောက် အကုန်ကြိုက်နေတော့ မထူးပါဘူး… အဲ့ဒီ ပတ္တမြားပုံထဲ အရောက်ပို့ပေးချင်တာပါ… ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်တွေ့ ဒုက္ခရောက်နေတာလေ… ဒီ Occupational Health and Safety ဆိုတဲ့ Policy, procedures တွေအတွက် တစ်ပါတ်အတွင်း ထိရောက်သော သင်ကြားမှုပြုရန် ဆိုတာပေါ့… ဆရာကြီးတောင် အလုံးစုံသိဖို့ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါ…
ဒါကြီးက ငယ်ငယ်ကတည်းက အအော်အငှောက်ခံခဲ့ရတာလေးသွားသတိရတယ်ဗျာ… အဘွားက ပြောလေ့ရှိတာက “ခေါင်းကိုသုံး၊ ခေါင်းကိုသုံး၊ ဘယ်အလုပ်မဆို ခေါင်းသုံးပြီးလုပ်ရတယ် မြေးရဲ့” ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့… ဟားဟား အခုက ပိုဆိုးတယ် သူကြီးရေ… လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုပြီးတော့ ဆရာကြီးက ဘာသာပြန်ထားပြီးသား ရှိတယ်လေ… အခုတော့ သိပ်လွယ်သွားပြီပေါ့… သူ ဘာသာပြန်ထားတာကိုး.. Check List တွေကအစ Procedure Form တွေပါ အလွယ်လေး ရတော့မှာဆိုတော့… ကျွန်တော့အတွက်ကတော့ ရွှေအိုးကြီးတဲ့ ကြီးတဲ့ ပတ္တမြားအိုးကြီးပါဘဲဗျာ…
သိသူများထပ်ဆွေးနွေးကြပြီး… မသိသူများ အလွယ်တကူသွားရောက်ဖတ်ကြပါကုန်…
သူကြီးရှေ့မို့ မမူးရဲသူ…. သူရိန်.. အေ့
.Occupational Health and Safety ဆိုတဲ့ Policy, .procedures တွေက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွက် မရှိသေးဘူးဗျ…ဆရာကြီးစာအုပ်ထွက်မှပဲ